Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada: Soomali iyo Muslimiin kale oo kasoo baxay saladda taraawiixda oo London gaari lagu marsiiyay!!
August 19 2017 01:00:01
Daawo Sawirada: Soomali iyo Muslimiin kale oo kasoo baxay saladda taraawiixda oo London gaari lagu marsiiyay!!
Shacab Soomali ah iyo Muslimiin kale oo Kasoo baxay Saladda Taraawiixda ayaa caawa waxaa gaari wayn oo VAN ah lagu marsiiyay Laamiga wayn ee kasoo horjeeda Masjidka Finsbury Park ee Waqooyiga London .
Mid kmid ah Dadkii kasoo baxay Masjid ka ayaa Allbanaadir.com u sheegay in uu arkay Soomaali ay waxyeelo kasoo gaartay gaarigaasi la jiirsiiyay, Wuxuna sheegay in uu arkay Hooyo Soomaali ah oo Daawac Culus a ah ,Waxuuna sheegay ninkaas goob jooga ahaa in uu arkayay dhaawacyo badan oo Soomaali iyo Muslimiin kale oo gaariga lamariyay.
Wixii warar ah ee ku soo Kordha Shilkaan iyo Warar kale kala soco Wararkayaga Danbe Insha allah K